Indlela Iwebhusayithi Yakho Ehamba Phansi Elilimaza Ngayo Ibhizinisi Lakho | Martech Zone
Eminyakeni edlule, bekufanele sikwenze uthuthela isiza sethu kumsingathi omusha ngemuva kokuthi umphathi wethu wamanje esanda kuqala ukuhamba kancane nokuhamba kancane. Akekho ofuna ukushintsha izinkampani zokubamba… ikakhulukazi umuntu obamba amawebhusayithi amaningi. Ukufuduka kungaba inqubo ebuhlungu impela. Ngaphandle kokunyusa isivinini, ligcina uthi lokuphotha luzungeza unikele ngokufuduka kwamahhala ngakho-ke kube yimpumelelo.
Bengingenakho ukukhetha, kepha, ngenxa yokuthi umsebenzi omningi engiwenzayo wenzela amasayithi amanye amaklayenti. Akubukeki kahle kakhulu uma isiza sami singalayishi ngokushesha! Lokho kusho ukuthi, akungithinti nje kuphela njengochwepheshe embonini, kuyakuthinta nawe.
Ukuhlola isivinini sewebhusayithi yakho kungahle kungabi yinto ebaluleke kakhulu kepha lokho kuze kube yilapho uthola isilinganiso seBounce noma isilinganiso se-Abandon senqola yakho yokuthenga. Imali engenayo yakho yokuguqulwa nokukhangisa yehla kancane ngaphandle kokwakhiwa okusebenzayo kwejubane lewebhusayithi yakho.
Ijubane lakho lesiza liyinhlanganisela yokusingathwa kwakho futhi ezinye izici. Futhi ngaphambi kokubheka ukusingathwa, kufanele uqede ukusebenzisa konke… bese ubheka ukusingathwa kwakho. Isivinini sesiza asigcini nje ngokuthinta ukusebenza komsebenzisi, sinomthelela ongezansi ezintweni ezimbalwa:
Amanani Wokuguqulwa - Izivakashi zakho eziyi-14% zizothenga kwenye indawo uma isiza sakho sihamba kancane.
Amanani Wokugcinwa - Izivakashi ezingama-50% zithi ngeke zithembeke kumawebhusayithi athatha isikhathi eside ukulayisha.
Izikhundla Zenjini Yokusesha - Izinjini zokusesha zifuna ukushayela izivakashi kumasayithi ahlinzeka ngomuzwa omuhle womsebenzisi. Kunenqwaba yezifundo ezibonisa ukuthi ijubane lesiza liyinto eqondile (iGoogle isho njalo) futhi ngoba abantu bahlala kusayithi elisheshayo, kuyisici esingaqondile futhi.
Competition - Ngisho umehluko wesivinini esingaqondakali phakathi kwakho nomncintiswano ungashintsha umbono wenkampani yabo uma uqhathanisa neyakho. Abathengi namathemba ebhizinisi avame ukubhekabheka phakathi kwamasayithi wabathengisi… kungokwakho okushesha ukwedlula izimbangi zakho?
Kuyini Ukushesha Kwesiza?
Yize lokho kuzwakala njengombuzo olula… kushesha kangakanani ukulayishwa kwewebhusayithi yakho… empeleni akunjalo. Kunezinto eziningi kakhulu ezithinta ijubane lekhasi:
Isikhathi sokuqalisa ibhayithi (TTFB) - Nakhu ukuthi i-webserver yakho iphendula ngokushesha kangakanani isicelo. Umphathi wewebhu onengqalasizinda empofu angaba nezinkinga zangaphakathi zomzila ezingathatha imizuzwana nje ukuthi isiza sakho siphendule… ungalokothi ukhathale ngokuphelele.
Ibanga kuya ku-Web Host - Kholwa noma ungakukholwa, ibanga elibonakalayo elisuka kusayithi lakho liye kwezivakashi zakho. Izinkampani ngokuvamile zisebenzisa i- Ukunikezwa kwenethiwekhi yokuqukethwe ukusiza ukugcina indawo yabo ngezinsizakusebenza ukuze abantu abavela kude nomsingathi babe nesipiliyoni esisheshayo.
Ukuqedwa Kwekhasi - Ikhasi lakho lingalayishwa ngokugcwele kepha libe nezimpahla ezingeziwe ezilayishwa ngemuva kokuthi ikhasi seliphothuliwe. Isibonelo, kunefayela le- ukulayisha ubuvila isici ezinhlelweni zesimanje zokuphathwa kokuqukethwe lapho isithombe singacelwanga empeleni uma singekho esifundeni esibukekayo isiphequluli esisibhekile. Njengoba umuntu eskrola, isithombe siyacelwa futhi sethulwe.
Izindaba Zakho Zokubamba
Ukukhokha amadola ambalwa ngaphezulu kungenza umehluko omkhulu uma kukhulunywa ngokusingathwa kwewebhu.
Ipulatifomu yakudala yokubamba ingahle isebenze kumaseva amadala nakwingqalasizinda yomzila futhi ingakaze ithuthukiswe. Njengoba ubuchwepheshe obusha budinga izinsizakusebenza ezingeziwe, isiza sakho sihamba kancane futhi sihamba kancane ngenxa yemishini yabo ephelelwe yisikhathi.
Ukubamba kwakho kungabiwa kumakhasimende amaningi ngokwengeziwe. Njengoba amanye amaklayenti esebenzisa izinsiza, isiza sakho sihamba kancane futhi sihamba kancane. Ubuchwepheshe obusha obusha bokubamba buyakwazi ukukhawulela izinsiza zesiza ngasinye noma i-akhawunti ukuze ungathintwa omunye umuntu.
Ubuchwepheshe obusha bokubamba imvamisa bufaka ingqalasizinda yamakhekhe okulondolozwa kwesikhashana nokulethwa kokuqukethwe.
Masenze izibalo. Ukhokha u- $ 8 ngenyanga ngewebhusayithi eshibhile futhi oncintisana naye ukhokha u- $ 100. Unamakhasimende ayi-1000 asebenzisa u- $ 300 nawe phakathi nonyaka. Ngoba isayithi lakho lihamba kancane, ulahlekelwa izivakashi zakho eziyi-14% kwiklayenti lakho.
Uyakholelwa ukuthi wonga u- $ 92 ngenyanga, an ukonga minyaka yonke kwe- $ 1,104. Woohoo! Kodwa empeleni, ulahlekelwa amakhasimende ayi-140 x $ 300 lilinye… ngakho-ke ulahlekelwe ama- $ 42,000 ebhizinisini ukusindisa izinzuzo ezimbalwa ekubanjweni kwakho kwewebhu.
Hawu! Bantu… musani ukubamba iqhaza ekusingatheni iwebhu!
I-WebiteSetup uhlanganise le infographic efundisayo, Indlela Iwebhusayithi Yakho Ehamba Ngayo Ishisa Ngayo Imbobo Ephaketheni Lakho, ukunikeza iqembu lakho amaqiniso adingekayo ukuhambisa inhlangano yakho kwingqalasizinda esheshayo noma ukuqasha iqembu lochwepheshe elingakusiza ekusebenziseni indawo yakho yamanje. Akudingeki kube yinto ebizayo. Eqinisweni, empeleni silondoloze imali ngomgcini wethu omusha!
Tags: ukulahlwa kwenqolaukwenziwa kwe-ecommerceukusebenza kwe-ecommerceukubamba amaqinisonokwenza indawoUkusebenza Kwesizaisivinini sesizaukusingathwa kancaneiwebhusayithi ehamba kancaneisivinini sewebhusayithi esihamba kancaneisikhathi sokuqalaisivinini sewebhu